Isithombo sesitshalo | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Isithombo sesitshalo
Ukufunda ukukhulisa ama-radishes: ukutshala, ukunakekela, ukuvuna
Umlimi ngamunye enhlwini lakhe lomsebenzi unesiko, lapho ekhula njalo okuyiyona into engalungile, into yebo ayikho. Phakathi kwezitshalo ezinjalo kwabaningi, ama-radishes awahlukile. Isiko esingazi kahle kakhulu. Kubonakala sengathi kunolwazi olwanele lokutshala isithombo, kodwa isivuno asijabuli noma kunjalo - imisila empofu izokhula.
Kungani isithombo sinzima, nezinye izinkinga lapho zikhula
Abalimi abaningi banama-radishes ahlobene nokuvulwa kwenkathi yemifino, ukusabalala kwentwasahlobo kanye nokunqoba kokuqala engadini. Phela, lezi zilimo ezimpande azidingi izimo ezikhethekile futhi zilula kakhulu. Kodwa, ngeshwa, kaningi futhi baba yizidangalo zokuqala. Kungani isithombo sibheka kumcibisholo, sinikeza intukuthelo noma imigodi, yiziphi amaphutha abalimi bemifino enza, ukuthi benzeni ukugcina isivuno - sizokhuluma ngakho konke lokhu kamuva esihlokweni.
Izici zokutshala nezitshalo ezikhulayo endaweni yokushisa, ukulungiselela, ukunakekelwa
I-Radish ingenye yemifino ethandwayo kakhulu emakethe yasekhaya, futhi uma usacabanga ukuthi kungenzeka ukuthi uyakhula unyaka wonke, khona-ke akukho ntengo yesitshalo nhlobo. Noma kunjalo, ukuthola izitshalo ezinomsoco ezinomsoco noma kunoma yisiphi isikhathi sonyaka, kufanelekile ukunakekela izimo ezifanele zokukhula nokuthuthukiswa kwazo.